Archive du 12-oct-2021
Loza mahatsiravina - RN 7 11 maty, 15 naratra tany Ankaramena
Olona 11 no namoy ny ainy, ary 15 naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’iny làlam-pirenena faha-7 iny.
Miitatra tsikelikely ihany ny tsy fahatomombanana mitranga eo anivon’ny fiarahamonina Malagasy vokatr’ity tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana eto amin’ny firenena efa averimberin’ny
Fanondranana olona mankany Mayotte Niara-tratra ny mpandeha 44 sy ireo atidoha
Olona miisa 46 saika hiondrana handeha an-tsokosoko ho any Mayotte no voasambotry ny zandary, ka ny 44 tamin'ireo dia mpandeha ary ny 2 kosa mpanamory sy mpikarakara iray.
Fizarana vola fisotroan-dronono Nikorontana noho ny fanavaozana karatra
Velon-taraina ireo beantitra mpisitraka fisotroan-dronona teto Antananarivo sy ny manodidina omaly noho ny filaharam-be tsy nifankahitana.
Manga Mila diovina tsara vao hohanina
Efa miparitaka eny an-tsena ny manga amin’izao. Ahitana karazany maro mihitsy izy ireny, izay lasa miteraka resabe eny anivon’ny fiarahamonina.
Njiva Rakotoharimalala Nanoratra tantara niaraka tamin’ny Barea
Njiva Rakotoharimalala no voasokajy ho mpilalaon'ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea nanoratra tantara indrindra ho an'ny Kitra Malagasy hatreto.
Fenoarivo “Noterena hivarotra amin’ny karana ny tompon-tany”
Tsy sinema, hoy ny filohan’ny vaomiera misahana ny fitantanana ny fananan-tany sy fanajariana ny tany eo anivon’ny antenimieram-pirenena, ny depiote Naivo Raholdina,
Akany hitaizana tanora eny Ambohidanierana Natao hahazaka olona hatramin’ny 300 isa
Miantso ireo zanaka am-pielezan’Ambohidanierana rehetra manoloana ny ezaka fananganana akany ataon’izy ireo eny Ambohidahy Avaradrano ny filohan’ny tanora Kristianina eny an-toerana
Taranja « Bodybuilding » Tafody an-tanindrazana omaly ireo mahery fo
Nigadona an-tanindrazana omaly 11 Oktobra 2021 ireo atleta nisolo tena an'i Madagasikara tamin'ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany taranja « Bodybuilding » izay natao tao Uzbekistan ny 3-6 oktobra lasa teo
Hitohy anio ny fitsarana Mihalalina ny raharaha Eddy boaderozy
Raharaha nafana tato anatin’ny andro maromaro moa izay ny tsy fahitana an’i Eddy Maminirina na « Eddy boaderozy »
Kristianina mandinika raharaham-pirenena “Vahaolana maika ny fanampiana ireo tantsaha”
Tsy henoheno intsony ny resaka Covid 19 ankehitriny, hoy ny Kristianina mandinika raharaham-pirenena, Ralaiarimanana,
Siteny sy Mailhol Nihaona sy niresaka raharaham-pirenena
Nisy ny fihaonana sy fiaraha-nisakafo teo amin’ny Depiote Siteny Randrianasoloniaiko sy Pasitera Mailhol André Christian omaly.
Angaredona andiany faha 16 Hatao any Toamasina ihany
Mafy ny fiantraikan’ny valanaretina manerana izao tontolo izao ary isan’ny voakasik’izany ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina,
Analamanga Park Nisy firehetana nampiahiahy omaly
Nisy firehetana tao Analamanga Park omaly tolakandro, raha ny fampitam-baovao voaray avy eo anivon’ny governoran’Analamanga.
Fandorana taratasin-gabone nitera-doza May ny trano 15, sprinter 1, kisoa 70
Nisehoana hain-trano mahatsiravina tao amin'ny Fokontany Ankaraobato kaominina ambonivohitr’Ambatoboeny omaly tamin’ny 10ora maraina teo.